Ii-FAQs - iJiande Chaomei yemihla ngemihla iikhemikhali Co.
Ndingayifumana njani isampuli?
Ukuba ufuna isampuli kuvavanyo, sinokuyenza ngokwesicelo sakho.
Ukuba yimveliso yethu eqhelekileyo esitokweni, uhlawula nje iindleko zothutho kunye nesampuli isimahla.
Ngaba unokwenza uyilo kuthi?
Inkonzo ye-OEM okanye ye-ODM iyafumaneka. Singayila imveliso kunye nephakheji ngokusekwe kwiimfuno zabathengi
Imibala eqhelekileyo yeemveliso onokuzikhetha imhlophe, luhlaza, bhlowu Enye imibala inokukhethwa nayo.
Njani malunga umbandela?
pp non-ephothiweyo, esebenzayo carbon (ozikhethelayo), umqhaphu ethambileyo, ukunyibilika lokucoca ulwelo, ivelufa (uyazikhethela).
Kuthekani ngexesha lokukhokelela kwimveliso yobuninzi?
Ukunyaniseka, kuxhomekeke kubungakanani beodolo kunye nexesha obeka ngalo iodolo.
Ngokubanzi, ixesha elikhokelayo malunga neentsuku ezingama-20-25. Ke sicebisa ukuba uqale ngokubuza kwangoko.